Fallaago dad ku laaysay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo – hareerley News
Posted on November 21, 2019 November 21, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay weerar ay koox fallaago ah ku qaadday magaalada Beni ee ku taal bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyay ay kasoo jeedeen jabhadda ADF ee ka dagaalanta halkaas.
Kooxdii weerarka soo qaaday waxay adeegsanayay baangado markii ay weerarka ku qaadeen halkaas.
Militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa joojiyay dagaalka inkasta oo ay xiisad ka taagan tahay halkaas.
Shacab careysan ayaa xiray waddooyinka magalaada Beni, waxay dhagxaan ku tuureen baabuur ay leedahay ha’yadda Qaramada Midoobey oo marayay halkaas.
Waxay Qaramada Midoobey ku eedeeyeen inay ku guuldareystay inay xaqiijiso amnigooda.
Maxay tahay sababta loo xiray Jawaar Maxamed?
Posted on July 1, 2020 July 1, 2020 Author Hareerley News
Jawar Mohammed, oo ah siyaasi caan ah oo ka tirsan qowmiyadda Oromada, ayaa la xiray xilli ay dhaceen rabshado daba socday dilka fannaan caan ah oo lagu magacaabi jiray Hachalu Hundessa. Ugu yaraan 50 ruux ayaa lagu dilay dalka Itoobiya kaddib markii ay dhaceen dibadbaxyo looga careysan yahay dhimashada fannaan caan ahaa oo kasoo jeeda […]
Wasaaradda Caafimaadka oo shaacisay kiisas Cusub oo Coronavirus
Posted on May 16, 2020 May 16, 2020 Author Hareerley News
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka, Dr. Fawziya Abikar Nur ayaa ka warbixiyay xaaladaha cusub ee ka soo kordhay caabuqa Covid Wasiirka waxay xaqiijisay maanta 73 xaaladood oo COVID-19 ah. Maamulka Puntland ayaa laga xaqiijiyay 25 xaaladood, Maamulka Somaliland 19 xaaladood, Maamulka Gobolka Banaadir 17 xaaladood, iyo Maamulka Koonfur Galbeed oo laga xaqiijiyay 12 xaaladood. Wadarta guud ee […]
Wasiir Shaqada iyo Shaqaalaha DFS Sadiiq Warfaa Oo la kulmay dhigiisa Sacuudiga
Posted on December 19, 2019 December 19, 2019 Author Hareerley News
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka Boqortooyadda Sacuudiga Carabiya, ayaa la kulmay Wasiirka Shaqada iyo Horumarinta Bulshada, Ahmed Al-Rajhi. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa ay uga wada hadleen Iskaashiga Shaqada iyo Horumarinta Bulshada ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Sacuudiga. […]